घरभाडा लिने, बस्न नदिने – Khabarhouse
घरभाडा लिने, बस्न नदिने
Khabar house | २६ बैशाख २०७७, शुक्रबार ०३:०३ | Comments
ललितपुर : मोरङ विराटनगरबाट हालै एक महिला ललितपुर महानगरपालिका–३ धोबीघाट आएकी थिइन्। त्यहाँ उनको डेरा छ। तर, बाहिरबाट आएका कारण कोरोना भाइरसको जोखिम हुन सक्ने भन्दै उनलाई त्यहाँ बस्न दिएनन्। वडाध्यक्ष श्रीगोपाल महर्जनका अनुसार त्यो घरमा एक वृद्धा बस्छिन्। उनले ती महिलालाई घरमा बस्न नदिएकी हुन्।
‘खोइ ! काभ्रेतिर जान्छु भन्थिन्, कता गइन् ? थाहा भएन’, वडाध्यक्ष महर्जनले भने । उनका अनुसार बाहिरी जिल्लाबाट काठमाडौं उपत्यका आउनेको संख्या बढेको छ । यसै साता पनि पोखराबाट अर्की महिला वडा नम्बर ३ मा आइन् । अन्य सवारी साधनमा आउने सम्भावना नदेखिपछि उनी एम्बुलेन्स चढेर आएकी थिइन्। छरछिमेकीले यसबारे वडामा गुनासो गरेपछि उनलाई घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्न भनिएको महर्जनले सुनाए।
‘उनले पोखराभन्दा काठमाडौं सुरक्षित छ भनिन्’, उनले भने ‘यसरी बाहिरबाट आउनेहरूका कारण त्रास बढेको छ।’ उनलाई जे चाहिन्छ वडामा खबर गर्न भनिएको छ। घरबाहिर निस्किन वञ्चित गरिएको उनले बताए। ललितपुरमा भित्रिनेको संख्या बढ्दो देखिए पछि स्थानीय सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ। वडा नम्बर ९ ले बाहिरबाट आउनेलाई बस्न नदिने भन्दै प्रेस विज्ञप्ति निकालेको छ।
स्थिति सामान्य नहुन्जेल भाडामा बस्नेहरूलाई नफर्किन आग्रह गरिएको छ। यसको जानकारी घरधनीले डेरामा बस्नेलाई फोनमार्फत दिनुपर्नेछ। जबर्जस्ती फर्किए टोल सुधार समितिको निगरानीमा १४ दिनसम्म पूरै घर ‘लक’ गरिने उल्लेख छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमराज भुसालले स्थानीय सरकारले त्यसरी घरबाट निकाल्ने र बस्नै नदिने काम उचित नभएको बताए। आजको अन्नपुर्ण पोस्टमा खबर छ ।